Caado-xanuunku waa maxay? | På blodigt allvar
Caado-xanuunku waa maxay?
Dhab ahaantii waa maxay waxa ku xanuuna markaad caadada heshid? Halkaan waxaan kugu caawineynaa ka warqabka astaamaha jirkaaga!
Astaamaha jirka ee caado-xanuunka
Ilmogaleenka oo murqihiisa muujinaya
Ilmogaleenku waa muruq weyn oo isku urura marka xuub-axaleedku/dhiigga caadadu uu soo baxayo. Marka jirka ay ka yimaadaan xuub-axaleed/dhiig caado waa wax lagu xanuunsan karo. Waxaad dareemi kartaa muruq-roor ka bilowda xuddunta hoosteeda oo u dhaadhaca ilaa iyo siilka, kaas oo dhalin kara kog ama xanuun.
Dareenwadayaalka oo uu cadaadis ku dhaco
Dareen wadayaal badan ayaa ku yaal aagga ilmogaleenka oo markuu soo kogo saameeya jirka intiisa kale, taas ayaa sabab u ah in muddada ay caadadu ku heyso aad xanuun ka dareemi karto dhinacyada gumaarka, dhabarka ama lugaha. Lallabada iyo madaxwareerka ku hayaa waxaa dhalin kara xanuunka, saxaradaadu hadday jilicsan tahayna waxaa ugu wacan caddadka prostaglandin* oo ku kordha jirka.
Dadku way kala duwan yihiin! Qaar xanuun badan ayey dareemaan, qaarna wax sidaa u daran ma dareemaan...
Ugxanayntu waxay qiyaastii ku beegan tahay laba caado dhexdooda. Waxaad qaddar kooban dareemi kartaa xanuun yar ama muruq-roor, laakiin waxaad iyana dareemi kartaa xanuun badan oo ku haynaya saacado dhawr ah. Xanuunka waxaa laga dareemaa qaybta hoose ee caloosha, badanaa markiiba hal dhinac.
Dadku way kala duwan yihiin
Caado-xanuunka xilliyadiisu wey kala duwan yihiin, wuxuu kugu dhici karaa caadada ka hor ama xilliga caadada ama dhawr maalmood xilliga caadada ka dib. Xanuunku wuxuu ku hayn karaa maalmo kala badan, siduu kuu qabtana wey kala duwanaan kartaa!
Xaaladdaada guud saamayn ayey ku leedahay sida jirkaaga uu xanuunka u maareeyo oo hadday xaaladdaadu wanaagsan tahay, aad caafimaad qabtid oo aad si wacan wax u cuntay oo u seexatay waxaa laga yaabaa inaad caado-xanuunka si uga duwan ugu dulqaadatid marka loo barbardhigo adigoo ildaran, daalan, dhibban, xanuunsan ama walwalsan.
*Prostaglandin: maaddo u eg hoormoon oo saameysa xaaladaha kala duwan ee jirka, tusaale ahaan heerka caado-xanuunka. Prostaglandin badan wuxuu keenaa xanuun badan.
Last updated 05/10/2019 - 11:22
Su’aalaha inta badan la is weydiiyo!
Xanuunku intee gaarsiisan yahay?